भिम केरुङको ‘रातो भुइँ’ सार्वजनिक - Samadarshi Sanchar
भिम केरुङको ‘रातो भुइँ’ सार्वजनिक
, बुधबार, ०५ कार्तिक, २०७७, दिउँसोको ०२:४१ बजे
दमक। झापाकाे कमल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ गेउरिया निवासी भीम केरुङद्धारा लिखित ‘रातो भुइँ’ ؙ पुस्तक बुधबार एक कार्यक्रम बिच सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाली समाज र राजनीतिलाई समेटेर लेखक केरुङले तयार गरेको पुस्तकको बुधबार जिल्लाको शिवसताक्षीस्थित झिलझिलेमा संक्षिप्त कार्यक्रम गरि सार्वजनिक गरिएको हो ।
पुस्तकको प्रकाशक गणेशप्रसाद लिम्बूले झोडा आन्दोलनका अग्रज देउकुमार राईलाई पुस्तक दिएर सार्वजनिक गरिएको लेखक केरुङले बताए ।
तत्कालीन नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ पाँचथरका सभापति समेत भएका राईकै नेतृत्वमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भूपू सैनिकलाई बसोबास दिलाउन सहयोग पु¥याएका थिए । पुस्तकमा लेखकले भूपू सैनिकहरु कसरी झोडामा आए भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
लेखकले विभिन्न दश अध्यायमा ती विषयवस्तुहरुलाई समावेश गरेका छन् । अध्याय १ मा प्राचीन मानव सभ्यता र चिहानबीचको सम्बन्ध, दोश्रोमा पहिचानसहितको संघीय संरचनामा किन मुलुक गएन ? भ्रम र यथार्थ, तेश्रो अध्यायमा समाज रुपान्तरणको एउटा जटिल पक्ष : जातीय विभेद तथा छुवाछूत, चौथो अध्यायमा सरकारी नोकरीमा आरक्षणको सवाल, पाँचौमा किन विवादित बन्यो, आदिवासी रंगशाला ? जस्ता विषयहरुलाई चित्रण गर्न खोजेका छन् ।
त्यसैगरि पुस्तकको छैठौ अध्यायमा लेखकले आफनै ठाउँ हाल कमल गाउँपालिका ७ स्थित विष्णुकठ्ठाका धिमाल जातिको विषयमा र सातौ अध्यायमा स्थानीय कमल ७ कै एउटा नलेखिएको इतिहास जो लालधोन्द्रा झोडाका भूपू सैनिकहरुका बारेमा खोजमूलक अध्ययन सामाग्रीलाई चित्रण गरेका छन् । यस्तै, उनले आठौ अध्यायमा सीतापुरी झोडाकाण्ड एक राजनीतिक स्वार्थ, नवौ अध्यायमा भूमि सम्बन्धी एेनहरुको विश्लेषण र दशाैं अध्यायमा भूमिसुधार असफल हुनुका लक्षणहरु सम्बन्धी आफनो अध्ययन सामाग्रीलाई समावेश गरेका छन् ।
२२६ पृष्ठको सो पुस्तक अघि लेखकले २०५६ सालमा ‘मसंगै फुलेको फूल’ कविता संग्रह निकालेका थिए । त्यस कविता संग्रहको विक्री वितरण साझा प्रकाशनले गरेको थियो ।
साहित्यसंगै वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय लेखक केरुङले यस पुस्तक समाज र राजनीति सम्बन्धी अध्ययन गर्नेका लागि पठनीय भएको दावी गरे ।